Fake nhau yekutarisa Nu.nl inomhanya nenyaya dzegoronavirus uye misoro yenhema: Martin Vrijland
Fake nhau yekutarisa Nu.nl inomhanya nenyaya dze coronavirus uye misoro yenhema
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 24 April 2020	• 13 Comments
"Nei vafunga chiDutch vapomeri kupomera Bill Gates corona," yaive musoro wazvo nu.nl chinyorwa mazviri ivo vakaita kechipiri kuyedza kutora boka rinogara richimutswa. Icho chokwadi chaanoisa izvi chinoratidza kuti iyo Netherlands yakamuka yave kutanga kuisa kutyisidzira kune masimba.
Mune chinyorwa ivo vanobatanidza munhu wangu nehungwaru marudzi ese eanodzora mamwe midhiya, ayo andinofumura. Kwenguva yakareba, iyo mimwe midhiya yakanyatsondiregera, asi ikozvino kuti webhusaiti yangu iri kukura zvakanyanya, ivo zvino voisa chimwe chinhu uye kwete kunyanya gare gare Nu.nl inouya nechinyorwa chinondiisa seanhema enhau. Iwe unogona kunyatsoona kuti vanoshanda pasi pehandi.
Kwete, ini handina mhosva Corona paGates! Icho chirevo chekurangana pachako Nu.nl! Muchokwadi, izvo inhema dzeNu.nl!
Pano pane saiti, chete mari yakawanda iyo Bill Gates inogadzira mumarudzi akasiyana siyana ekuvandudza ekudzivirira uye makambani ekugadzira ayo akaiswa pachena. Aya ndiwo chokwadi chakaomesera chinogona kuongororwa nemunhu wese uye hatidi 'Ministry of Nu.nl chokwadi' icho.
Vanobva vanongedzera kuchinyorwa muna Ndira - pamwe pakutanga kweiyi dambudziko re corona - umo ini ndinoratidza patent kubva kuPirbright Institute. Mune icho chinyorwa ini ndinotsanangura kuti akawanda emakona ekuvhiya emapaini ane patents uye kuti Bill Gates anoita kunge ndiye anodyara kumashure kwesangano iri.
Coronaviruses ari (zvakare) akavakirwa mumarabhoritari. Icho ichokwadi. Patents dzinozorora pane izvozvo. Ivo vanozviita kuti vavake vaccin. Izvo hazvireve kuti yazvino coronavirus covid-19 iri rabhoritari-rakabvumirwa chinyorwa. Izvo hazvireve kuti Pirbright Institute kana kuti Bill Gates ndiye anokonzera Covid-19 kubuda. Ini handina kutaura izvozvo uye handigoni kuzvitaura, nekuti hapana humbowo hweizvozvo. Unogona kushamisika.
Zvandinoita kubvunza mibvunzo yakaoma. Uye iwe unofanirwa. Iwe unofanirwa kuramba uchizvibvunza zvinhu.
Muenzaniso wemubvunzo wakakomba uyu ndewekuti covid-19 yakagadzirwa sei. Hutachiona hwechisikwa hwakashandurwa, hutachiona hwakachinjika kupukunyuka rabha kana pamwe hutachiona nekugadzira. Mumwe muenzaniso wemubvunzo wakadai ndewekuti unopinda sei chaizvo mumuviri wemunhu (ona pano).
Masangano akadai saNu.nl anoda kuumba rudzi rweGeorge Orwell 1984 'Ministry of Chokwadi' iyo inofanirwa kudzvinyirira chero pfungwa uye inoita kunge inoyedza kuona kuti vanhu vanogona kungotevedzera chokwadi chimwe: chokwadi chenyika uye 'nyanzvi' dzayo. Izvi zvinoreva kuti iwe haugone kubvunza mibvunzo yakaoma. Iwe unogona chete kuteerera kune "nyika nyanzvi". Zvinoenda nenzira iyoyo.
In imwe nyaya kubva muna 28 January Ndakanongedza kuti Bill Gates akati muna 2017 kuti dambudziko rinotevera rinogona kunge rakagadzirwa pachikopiyuta.
Kana zviri zveNu.nl, tinogona kunge tisisiri kuita hukama. Ndiko "kufunga kwekurangana". Iwe unongofanira kuvhara uye kumedza chero izvo zvinobuditswa nevezvenhau pauri. Kana zvisina kudaro iwe une kufungidzira kana iwe unopikisa unopandukira (iwe une chirwere cheEYE). Kwete, kwete, kwete Nu.nl! Vanhu vanofanirwa Zvakanaka chengetedza izvo! Vanhu vanofanirwa Zvakanaka ramba uchibvunza mibvunzo inonetsa. Iyi ikodzero yakakosha.
The moment yatinorasa iyo kodzero yekubvunza mibvunzo yakakosha, isu tinorarama pasi pehutongi hwehutongi.
Nu.nl inoita kunge ichida kuti hurumende yakadai iunzwe, nekuti kutsoropodzwa kwega kwega kunodzingwa se "zano rekurangana". Kwangu kutsoropodzwa kwakabatana neakadzora mamwe midhiya masaiti masaiti (ayo muhomwe yenyika nekuti ivo vanopera simba mukati mekuita zvinhu nenzira dzakasiyana.
Saka zvine musoro kutaura nezveBill Gates. Haufanire kushamisika here kuti nei mumwe munhu akazoita bhirionari uye anzvenga hurukuro dzemutero nezve kudzikiswa kwehuwandu kuburikidza nekuchera? Haufanire kushamisika kuti nei munhu achiisa mari mumakambani ese aya ekuchera; sei munhu aine patent application pa crypto kubhadhara kuburikidza nehuropi hwako vakadaro? Iwe haubvumirwe kushamisika kana paine chirongwa chekumashure kwacho?
Izvo hazvifanirwe kuwana chero crazier! Saka kana ini ndikangoerekana ndawana mabhiriyoni mashoma pane account yangu mangwana, iyo media yese uye zvematongerwo enyika zviri patsoka dzangu uye mibvunzo yakaoma haina kufanira? Ehe, chirevo icho chinoratidzika kunge chakarurama mune zvakaitika kuna Bill Gates.
Munyika yakasununguka, isu tinofanirwa kuramba tichibvunza mibvunzo. Munyika yakasununguka, isu tinofanira kuramba tichishoropfuma vapfumi epasi. Munyika yakasununguka, hatifanirwe kutungamirwa nenhau dziri muhomwe yeavo vakapfuma.
Nu.nl yakatengwa yakawanda muhomwe yemari hombe. Chero chipikiso chinobviswa uye chinomira mauto enhau inozadza mhinduro. Chero munhu anoti chero chinhu chinokanganisa nyaya yavo chinobviswa, senge mhinduro yangu pane chinyorwa chavo.
Chiitiko 201 corona hutachiona kurovedza mavhiki matanhatu pamberi paWuhan kusimuka, inofanidza kufanana mamiriro
Microsoft patent 2020-060606 inobatanidza uropi hwevanhu kune crypto mubhadharo system
Iwebsite nepnieuws-checker.nl inofanirwa kupesana nehurumende yakagadzikana munyika yako maonero
Tags: bhiri, cheki, cheki, vanyengeri vanofunga, conspiracies, rangano rwenhema, corona, corona dambudziko, coronavirus, Gates, institute, Martin, ushumiri, nu, nu.nl, bvumidzwa, Pirbrght, Pirbright, vaccinations, vaccines, motokari, nyika yakasununguka, Chokwadi
24 April 2020 pa 09: 18
24 April 2020 pa 09: 46
Iyo Netherlands, iyo nyika yezvakavanzika, zvakawanda zvakavanzika
uye uko 'vashandi vakachena' vanogona kuvanza zvakavanzika zvakanaka. Yakanakira iyo yakanyarara, inonyengera udzvinyiriri.
24 April 2020 pa 10: 10
Verenga zvirevo pasi peichi chinyorwa cheNU.nl, izvo (sekugara neNU.nl) zvakanyanya kufadza kupfuura chinyorwa ichocho. Kana iwe ukaverenga zvakati wandei pasi pechinyorwa ichocho, unogona kunyatsoona kuti (chikamu chakakura kwazvo) cheizvi mhinduro dzinotumirwa nevanhu vavakashandira mukati uye kuti vanhu vavakashandira (kana vanhu vamwe chete pasi peimwe nhoroondo) zvino vozonyora maitiro aya anopindurwa kune. Zvinobva zvave pachena chaizvo kana iwe ukaita izvi kwenguva yakareba nezvakakosha 'zvemamiriro ezvinhu' kubva kune akadai masosi, iwe munguva pfupi iwe uchaona nzira iri pachena inobuda mumhinduro (kazhinji inobvumidza uye zvishoma kuwedzera yakanyanya mune iyo nyaya).
Muka 36 akanyora kuti:
24 April 2020 pa 13: 13
Ehe, izvo ndizvo, ndakaona zvakare kuti kune internet troll anoshanda pano nepapo. Ini ndinozvisarudzawo ipapo! Mumwe akazvirega achinyengerwa nevhidhiyo yavanokunda chero zvakadaro uye zvese zvirongwa zvichapunzirwa kuburikidza. Mumwe munhuwo zvake aisazombotaura izvozvo. Zvirongwa zvipi?
Pa instagram ivo vanogara vachikanda nehana yekufunga kana nehana yekunyengerera geek.
Zvinoshungurudza neMSM kuti ivo vanoratidzika sooo vari kuda kushanda nematroll. Sezviri pachena vachiri kutya kuti chokwadi chichava pachena uye sezviri pachena vane zvakakwana kuvanza zvimwe vaisazoita kurwa kwakadaro. Izvo zvinongotisimbisa kuti tirambe tichimutsa vanhu!
24 April 2020 pa 16: 27
Iwe unogona kuti iyo MSM inoenderana nehurumende! Dzimwe nguva ruzhinji runofungidzirwa kusabvumirana nehurumende. Izvi ndezvekuvhiringidza, kugadzira kuvhiringidzika uye kuita mari. Nekuti ndizvo zvavanoda. Iko kune kudyidzana kwakanyanya pamwe nehungwaru masevhisi nekutarisa uye kutungamira maitiro ehuwandu kubudikidza nekupa mhinduro, etc. Izvi zvinoitwa nechirongwa chakatemerwa kusatsigira. Rega vakomana vatete, varanda vanoda Ze. Mukuwedzera, muranda wepakati ane yakadzika kwazvo iq, zvakanyanyisa kukosha kupona iq.
24 April 2020 pa 16: 01
25 April 2020 pa 00: 36
chokwadi Fritsie hapana chakaipa neizvozvo, ingo simbisa thumbscrews
Panofanira kuve neyakaipisisa dambudziko sangano rinotungamirwa neDziviriro kubata dambudziko re corona. Yakadai 'National Command Center' yakadaro inofanira kupihwa masimba ari kusvika kure.
ps: Leiden ndiyo hwaro hweMinerva
25 April 2020 pa 19: 00
sokunge kuti havasati vachitamba nechepakati chikamu mune ino corvid19 mashandiro, iyo cello lens ndiyo imwe muenzaniso yakadaro ye megalomaniac sociopath.
24 April 2020 pa 16: 21
zvakapenga chero zvakadaro kuti isu titeerere kumufananidzo pasina mamiriro ekurapa kana ruzivo. Zvinotonyanya kukosha kuti uzive kuti anomiririra ani.
24 April 2020 pa 21: 32
Apa ndipo panotangira kunyemwerera zvishoma nezvishoma naamai vachockers, pasina vamwe nezvazvo. Iyo yekudhijitari yekubhadhara nzira / mari.
26 April 2020 pa 11: 03
Kurwisa ndiko kudzivirira kwakanyanya
2 May 2020 pa 13: 39
Iyo Dubious COVID Models
Mhando mbiri huru dziri kushandiswa kuWest kubva pakuparidzirwa kweanoparadzira coronavirus kuenda kuEurope uye USA "kufanotaura" uye kupindura kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Imwe yakavakirwa kuImperial College yeLondon. Yechipiri yakagadziridzwa, ichisimbisa zvinokanganisa maU.SA, neUniversity of Washington's Institute for Health Metrics uye Evaluation (IHME) muSeattle, padyo nepamba pe Microsoft Microsoft muvambi. Chii vashoma vanoziva ndechekuti mapoka maviri aya anokodzera kuvepo kune mari ine huremu nemisero yekuregererwa inomira kuita mabhirioni chaiwo ekuchengeterwa mishonga yekuchera uye mimwe mishonga yekurapa coronavirus - The Bill naMelinda Gates Foundation.
Neil Ferguson neboka rake rekuenzanisira kuImperi College, mukuwedzera mukutsigirwa neWHO, vanogamuchira mamirioni kubva kuBill & Melinda Gates Foundation. Ferguson anotungamira Vaccine Impact Modeling Consortium paImperi College iyo inonyora sevanozvitsigira ivo Bill & Melinda Gates Foundation uye Gates-yakadzoserwa GAVI-iyo yekudzivirira mubatanidzwa. Kubva 2006 kusvika muna 2018 Gates Foundation yakaisa mari inoshamisa ye $ 184,872,226.99 mumaFerguson's Imperi College modelling modelling.
Nekudaro, hwaro hweGates hwakatanga kudururira mamirioni mukushanda kwaFerguson mushure mekuita kwake kusarongeka nekuzivikanwa, zvichitungamira vamwe kuti Ferguson imwe ye "sainzi yekutora" basa.
22 May 2020 pa 17: 52
« Luxands inotengesa makamera ayo anogona kuona kuburikidza (coronavirus) kumeso masks
"Caring vashandi vanopururudza pamwe bhonasi yako corona kubheja", vanodaro Führer »
Kushanya kwakazara: 2.583.951
ongorora op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
Mupanduki op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
Bery op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
Riffian op Minneapolis George Floyd Mapurisa Murder Nzira yekusafadza Hondo Yenyika?
Benzo Wakker op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke